The Institute for the Study and Treatment of Pain - SHONA Chii chinonzi IMS? GunnIMS: Kukurudzirwa Kwemakumbo
SHONA Chii chinonzi IMS? GunnIMS: Kukurudzirwa Kwemakumbo
Chii chinonzi IMS? GunnIMS: Kukurudzirwa Kwemakumbo
SHONA Shanduro iyi inoshandurwa
Iri peji rakakurumidza kushandurwa kuburikidza neGoogle Translate, kombiyuta yakaita basa mukushandura ruzivo rwehutano hwehutano hwehutano kuvanhu. Shandisa pasi rebhokisi pasi nechokurudyi chepi zvese pewebhu kuitira kushandura ruzivo kumutauro wako waunoda. Kana uine mibvunzo, tapota taura nesu kuti tikumbire rubatsiro. Ndapota kangamwira chero zvikanganiso zve typographical, vanhu chaivo vashanduri vanozvidira vanokoshesa zvikuru. ; )
Chii chinonzi Gunn IMS? Gunn Instuscular Stimulation
Kuwedzera kwemasimba uye kusimbiswa kwemisungo hakugoni kushandiswa uye 'kutemwa,' apo 'painkillers' nemamwe mapiritsi anonyanya kuvhara marwadzo (kazhinji asina kunaka) uye anokurudzira doro, kuwedzera dambudziko racho. Neuropathy chete inopindura kune chinhu chinowedzera simba.
Kugadziriswa kweMakumbo (IMS) inokwana hutachiona hwehutano uye hutano hwemyofascial pain syndromes (marwadzo asingagumi anowanzoitika mumusishuvhuke system kana pasina chiratidzo chakajeka chokukuvara kana kuputika). IMS yakavakirwa muWestern Medical Science, uye ine nheyo yakasimba mumuenzaniso wayo we radiculopathic wemarwadzo, ayo zvino anotsigirwa nenyanzvi dzakawanda mumunda. Yakagadziridzwa naDkt. Gunn paakanga ari chiremba kuMushandi Wekugadzirisa Bhuku reBritish Columbia mumakore makumi manomwe, kwaakatsvaga nhamba huru yematambudziko asinganzwisisiki mushure mekushungurudzika nemitemo isingabatsiri yaanogona. Kurapa, iyo inoshandiswa kugadziriswa nenyuchi nokuti ndiyo iyo inonzi thinnest midziyo inowanikwa yakagadzirirwa kupinda mukati mukati memaviri emumusungo, kunyanya inowanikwa zvinokonzerwa nemisumbu yakabvumirana uye yakaderedzwa kubva pakutambudzika.
IMS inonyatsovimba nekuongorora kwakakwana kwemuviri nemurwere ane unyanzvi, akadzidziswa kuziva zviratidzo zvehutano hwepfungwa. Kuongorora kwepanyama kunokosha zvikuru sezvo kurwadziwa kusingagumi kunowanzova neurological kupesana nemagadziro, uye naizvozvo, zvisingaoneki kune zvinodhura X-ray, MRI Test, Bone uye CT Scans. Kusakwanisa kuziva zviratidzo izvi kuchaguma nekusarudzwa kusina kururama, uye nenzira iyoyo, kutanga kwarombo kwoutano hwepanyama.
Kurapa kunosanganisira akaoma anochera munharaunda dzenharaunda dzomuviri pasina kuisa chero chinhu chipi nechipi. Nzvimbo dzingano dzinogona kunge dziri pane epicenter of taut, zvinyoro zvisinga musungo, kana dzinogona kunge dziri pedo nemutsanga apo mutsara unogona kunge wakatsamwiswa uye unofadza. Kupindira kwemazuva mashoma musimba hakunzwisisi; Zvisinei, kupfupika, musimba unotapudza 'huchabata' tsono mune izvo zvinogona kurondedzerwa senzwi rekudzivirira. Chigumisiro chacho katatu. Chimwe, mutambo wakadzika mumusungo unokurudzirwa, zvichiita kuti ugare wakasununguka (kureba). Iviri, nenyuchi inokonzera kukuvadza kuduku kunokonzera ropa munzvimbo iyi, kutanga hutano hwekuzvarwa. Zvitatu, kurapa kunoita kuti magetsi ave musimba kuitira kuti mutsara urambe wakashanda zvakare. Nyore inoshandiswa muImS, kuburikidza nekukurudzira kusungurudza kwemasumbu, inowanzova chinhu chakasarudzwa uye chakasiyana-siyana chekuongororwa kweNeuropathic Muscle Pain.
Chinangwa chekurapa ndechekusunungura musuru kupfupika, iyo inomanikidza uye inogumbura mutsara. Nzvimbo dzepamusoro dzinogona kukanganisa, uye kudhonza kusingaperi kwemisungo yakaderedzwa kunogona kusunungurwa. IMS inobudirira kwazvo pakusunungura misungo yakapfupika pasi pesangano, zvichidaro zvinokonzera marwadzo anokanganisa kubva musumbu inodhonza. IMS, chaizvoizvo, inobata chikonzero chinokonzerwa neuropathic chinokonzera marwadzo. Kana ichinyatsogadzirwa, IMS ine unhu hunoshamisa hwekubudirira, sekuratidzwa nekuvandudzirwa kwezviratidzo nezviratidzo, kunyange nekurwadziwa kusingaperi kwemashoko zviratidzo.
IMS inofananidzwa mune dzimwe nzira yekugadzirisa; Zvisinei, kune huwandu hwakakosha hunokosha. IMS inoda kuti kuongororwa kwezvokurapa uye kuongororwa nemumwe munhu ane ruzivo rwemaatomy, kuisa masayeri kunoratidzirwa nezviratidzo zvemuviri uye kwete maererano nezvinofanotaurwa, zvisiri zvezvesayenzi, nepo zvinotenderera uye zvinangwa zvinowanzoitika munguva pfupi.
KEYWORDS: kukurudzirwa kwemuviri, intra-muscular, ims, cgims, gunn ims, dryinglingling, acupuncture, trigger point, myofascial pain
FINDA ZVIMWE ZVOKUDZIDZA - INTERNATIONAL DIRECTORY